Iminqweno emi-5 kubakhangeli ... Opera | Martech Zone
Iminqweno emi-5 kubakhangeli ... Opera
NgoLwesibini, Julayi 24, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
UModifoo undicelile ukuba ndinike ingxelo ngento endivakalelwa kukuba isikhangeli seOpera sifuna ukufumana isabelo sentengiso. I-Opera sisikhangeli esimnandi esivela eNorway esisebenzayo kwaye sisebenza ngendlela emnandi. Ndingumlandeli wenguqulo yeFowuni ebaleka kwifowuni yam. I-Opera isenokungayithandi impendulo yam koku - kwaye ayisayi kubakho nesinye isikhangeli - kodwa nantsi iya.
Iminqweno emi-5 yeOpera
Yakha icandelo legridi yedatha elinokuphuhliswa kusetyenziswa i-HTML esisiseko kwaye mhlawumbi neCSS iphambili. Kuya kufuneka ukuba ibe ne-paging, ihlele, i-edit-in-place, njl.
Yakha icandelo lomdlali weendaba elixhasa ixesha elikhawulezayo, iWindows Media, kunye neAudio yeaudio. Kwakhona, ndivumele ndikhulele kuyo ndisebenzisa i-HTML kunye ne-CSS. Yongeza amandla okusasaza.
Yakha icandelo lomhleli eliza kukhupha i-HTML kunye ne-CSS enokuthelekiswa nawo nawuphi na umhleli olungileyo we-Intanethi. Vumela abasebenzisi ukuba bakhulele kuyo, bathumele kwaye bafumane kuyo ngeXML-RPC kunye neFTP.
Yakha icandelo lokutshata elichasene neetshathi kwi-Excel. Vumela ukuyibopha kwi-datagrid ngaphandle komthungo.
Akukho apho kwiphepha lakho lasekhaya kukho uphawu olwamkelekileyo lwaBaphuhlisi! Abaphuhlisi baya kwenza okanye baphule isikhangeli sakho. Isakhono sokunyusa isikhangeli ukudibanisa nesisombululo sakho yeyona ndlela ikhawulezayo yokufumana isabelo sentengiso.
Ngamafutshane, ndingathanda ukubona iOpera qamba kwaye waphule imithetho yezikhangeli. I-Safari kunye ne-iPhone benza nje oku. Abadlali ngemigaqo, benza imithetho!
Izicelo ziyaqhubeka nokuya kwi-Intanethi kwaye ziya zisiba nzima ngakumbi. Izikhangeli ezixhasa izinto ezisisiseko esijonge kuzo RIA Iitekhnoloji zokwakha, ezinje ngeFlex kunye neAIR, ziya kuguqula iSoftware njengeshishini leNkonzo kwaye ifumane isabelo sentengiso kakhulu.
Yenza abantu basebenze kwisikhangeli sakho, Opera. Emva koko baya kudlala kuyo!
I-RSS xa ithelekiswa ne-imeyile: Imbono yokuThengisa
Ukuhambisa ibhlog: I-Alpesh Nakars 'Blogosphere
Jul 25, 2007 ngo-4: 12 AM
Enkosi ngokwabelana ngeengcinga zakho.
Ndivuma ngokupheleleyo ukuba iOpera kufuneka ifumane indlela eyahlukileyo “kunokonwabela nje” abasebenzisi. Ngaloo ndlela bafumana (mhlawumbi) iziphequluli ezilungileyo, kodwa kuphela i-5% eyisebenzisa ngokwenene. Badinga indlela eyahlukileyo, kwaye kuba bengenawo amandla kaMicrosoft, kufuneka benze ubuchule bokuyila.
Ndiyawuthanda umbono wakho malunga nokwenza abaphuhlisi bazive bamkelekile. Inqaku elihle kakhulu.
Jul 25, 2007 ngo-7: 52 AM
Uluhlu oluhle kakhulu, kwaye inqaku lokugqibela lixhokonxa ingcinga. http://dev.opera.com/ ikhona kwaye inomxholo olungileyo kodwa umntu ufanele ukuyifumana njani, eh? Iindaba ezimnandi zezokuba uninzi lweminqweno yakho inokwenzeka kwakamsinyane kunokuba ucinga - kuthekani
WHTWG's datagrid spec
Iividiyo zeWHTWG kunye nenguqulo ye-Opera yokujonga kwangaphambili kunye nenkxaso ye-VIDEO.
Ayicacanga ngokupheleleyo kum into obuyicinga ngokuthumela kunye neengxelo zokubuyiswa, kodwa umxholo oHlelekayo uya kubonelela uninzi “lwemibhobho”.
Ukutshatisa ngumnqweno onomdla wokuba i-AFAIK ingabikho kuyo nayiphi na indlela, kodwa kuthekani nge-Opera enesidima Inkxaso yeSVG? Ngeskripthi esincinci, uya kufumana iitshathi zakho.
NgoJulayi 25, 2007 ngo-3:13 PM
Ndisebenza ekubeni kutheni uluvo lwakho lungabonakali… enye ibug kwenye indawo! Argh!
Jul 27, 2007 ngo-3: 25 AM
...mhlawumbi kungenxa yokuba esebenzisa iOpera? 🙂
Btw, umva womculo awubonakali uyasebenza - kwi "5 wishes" zam ezisuka kweyakho... Ngaba le nto inokunxulumana (ndicinga ukuba ndisanda kuzikhupha njengomntu ongengomdwelisi?)
Agasti 17, 2007 kwi-11: 35 AM
Mart, ingqikelelo malunga ne-Opera ukuba ngumtyholi idinga uvavanyo oluthile - uxolo malunga nogaxekile lwezimvo 😉
Doug, mhlawumbi unayo iplagin "yokhuseleko lwamagqabantshintshi" ecinga ukuba uluvo luhlaselo lwescript esinqamlezayo?